Fundisa wena amacebo ambalwa ukuthatha kahle futha ukhonkolo phansi - China Qingdao CO-NELE Group
Fundisa wena amacebo ambalwa ukuthatha kahle phansi ukhonkolo futha
Lapho ipayipi selibekiwe phansi, lapho ukuthambekela piping ukhonkolo futha likhulu, ukhonkolo kungenzeka flow phansi ngenxa isisindo ayo iphayiphi enalokho kuthambekela, okubangela Igebe ipayipi eveza noma okubangela ukhonkolo ukuba kuhlukaniswa ngenxa self-egeleza, kanjalo okubangela ipayipi eveza ukuba ivimbekile. Ukuze ugweme lokhu, izilinganiso elandelayo ingase ikhishwe:
1. Lapho uzotshala ukhonkolo phansi, self-ukugeleza ukhonkolo ihlobene eduze ukuwa yayo. Amanzi kufanele akhishwa phambi ukudonsa ukhonkolo, hlola emalungeni ipayipi ngalinye ukuqinisekisa ukuthi uphawu kungaqali amanzi seep, bese ekhiphela nosimende gcoba ipayipi futhi ngesikhathi esifanayo Umoya iyanqamuka ukushajwa.
2. Lapho ukuthambekela piping mkhulu kunezinhliziyo 4 ° -7 °, ipayipi ovundlile elihambisana ubude izikhathi ezingaphezu kuka-5 yokwehla mpo kufanele esekugcineni phambi ipayipi downwardly bayichezukisa, kanye esizikalayo flow of ukhonkolo kungagwenywa ukumelana kokukhuhlana.
Qingdao futha ukhonkolo intengo iloli (4)
3. Lapho ukuthambekela ipayipi mkhulu kunezinhliziyo 7 ° -12 °, ngaphezu ipayipi ovundlile izikhathi 5 ubude isethi ekupheleni phambi ipayipi enalokho kuthambekela, i-valve qeda kufanele esekugcineni engenhla ipayipi phansi. Phakathi nenqubo ukudonsa, uma kukhona umgodi iphayiphi enalokho kuthambekela, valve qeda kufanele livulwe lokuqala kuze iphayiphi enalokho kuthambekela ligcwele ukhonkolo, futhi lapho valve qeda ligcwala nosimende, valve qeda ivaliwe futhi ukudonsa evamile wenziwa .
4. ipayipi phansi nge iconsi elikhulu ingafakwa maphakathi ipayipi thwi phansi ukufaka ipayipi stop ukuthi uba ukubopha. Faka eziningana isipanji kanzima amabhola noma ukuhlanza Imigudu phambi uzotshala nosimende ukugwema ukulahleka nodaka. Abakwazi ukubamba isisindo nodaka.
5. Lapho kunqandwe izimo indawo, uma kukhona isikhala esanele ukuhlela ipayipi ovundlile ekupheleni phambi ipayipi phansi bayichezukisa, hose, indololwane noma ipayipi annular kungaba esikhundleni ingasetshenziswa ukwandisa ukumelana kokukhuhlana futhi kuvimbele ukhonkolo kusukela egeleza phansi esigabeni ipayipi.
Qingdao futha ukhonkolo intengo iloli (6)
Nokho, kungakhathaliseki ukuthi futha ukhonkolo ixhunyiwe liye phezulu noma phansi, lo ovundlile ukuguqulwa ubude amapayipi ezahlukene, e piping uqobo, ngenxa izinhlobo ezahlukene, izinombolo kanye nesimo sendawo we amapayipi, langempela eveza ibanga ukuphakama futhi ezahlukene, okuyinto kuyinto elula ekubaleni. Buyisela oyindilinga tube, indololwane, hose, kuze tube mpo, phansi tube mpo, njll ku obuphelele ovundlile. Ngesikhathi esifanayo, le ovundlile ezimali value futhi ezihlobene ukhonkolo izici, ipayipi ubukhulu nokunye.
Thumela isikhathi: Nov-21-2019